Ihe gbasara ihe gbasara Spam
Ọkọlọtọ na-atụgharị uche na-ekwu okwu na-adị gburugburu ruo oge ụfọdụ. Ọ gụnyere iji oji nwa SEO iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ na-egosipụta na Google Analytics maka weebụsaịtị ndị ọzọ. Njikọ onye na-ezo aka bụ nkịta nke na-ejikọta onye na-eme ihe n'ịntanetị gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwu okwu. Usoro a aghọwo ọkwá dị elu na Reddit na HackerNews.
Ivan Konovalov, ọkachamara ọkachamara , na-ekwu na ojiji nke ndị na-ezo aka na-abata na ọkwa ọzọ maka mgbalị nke Vitaly A. Popov - onye nwe spam website darodar.com. Ebe nrụọrụ weebụ ya na - eji koodu nchịkọta nchịkọta Google Analytics nke na - enye ohere iji wepụta ihe niile njirimara dị ugbu a n'otu oge. Mgbe a na-ejikọta otu peeji nke otu nchịkọta nchịkọta nchịkọta dịka nke ị na-egosipụta na nchịkọta weebụ gị. N'ụzọ doro anya, ọ dịghị mkpa ka onye ọ bụla mara URL gị iji webata ebe nrụọrụ weebụ gị. Ihe ndị spammers chọrọ bụ ịkọ ma ọ bụ ping nchịkọta nchịkọta gị na ibe ha.
Ugbu a, ka anyị laghachi na spam Russia, Popov ejiriwo usoro a jiri mmetụta ọjọọ. Otu ntinye ọ bụla n'ime njikọ ya ndị a na-agbagharị na-eduga gị na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Amazon, eBay ma ọ bụ AliExpress. Nke a na-facilitated site na Mgbakwunye njikọ dubbed IloveVitaly.com na routed site ya na ebe nrụọrụ weebụ. Kedu ka esi enweta ego a? Ọfọn, ọ gaghị eme ego ọ bụla ma ọ bụrụ na ị pịgharịa na redirect njikọ na-enweghị ịzụta site website pụta. Otú ọ dị, mgbe ị zụrụ n'ọdịnihu, Mr..Popov site na weebụsaịtị Vitality ga-enweta ọrụ na azụmahịa gị.
Ọzọkwa, Maazị Popov na-eche na ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ na-enwe ohere ka ukwuu ịzụta ihe mgbe niile. Ozugbo ị nwetara nuki kuki ya, a na-etinye gị na ndụ. Ọnụ ọgụgụ si na SimilarWeb na-egosi Darodar.com na-adọta ihe karịrị otu nde ndị ọbịa kwa ọnwa.
Popov ka esiri na-agbakwụnye ọhụụ ọhụrụ na omume ọjọọ ya mgbe ọ na-edebanye aha weebụsaịtị ọhụrụ aha ya bụ thehulfingtonpost.com. Na nke a, onye webmaster ma ọ bụ onye nchịkwa na-ahụ na ngalaba a na-ebuli na nchịkọta ha ma na-elele anya maka 'aha ha' na Huffington Post. O doro anya na ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime mmemme ndị ọ na-eji arụ ọrụ machibidoro Mr. Popov iwu. Ebe ọ bụ na ọ ka na-azụpụta okporo ụzọ, ọbụlagodi na-egbochi spam iwu nwere ike ghara ịta ya ahụhụ n'ihi na ha na-ekpuchi mgbasa ozi ahịa mgbasa ozi dị ka ekwuru na okwu na ọnọdụ.
Ka o sina dị, enwere ike ịtụleghachi omume ya n'ọdịnihu nwere ike ibute nkwụsị nkwekọrịta mmekọ ya. N'ọdịnihu dị nso, Huffington Post nwekwara ike itinye aka na iwu iwu kwadoro na njide nke ngalaba ahụ n'okpuru mmebi nke ikikere ụghalaahia. Ruo mgbe nke a mere, Maazị Popov ga-anọgide na-etinye ọtụtụ ego maka ekele ndị a na-enweta site n'aka ndị nwe ụlọ ọrụ site na ngalaba 31 ya na ndị mmekọ ya.
Ugbu a, a na-agwa gị banyere spam Russia; anyị nwere ike ịme ka ị wepu spam ntinye sitere na Google Analytics site na itinye ya na ndepụta nke akaụntụ gị. Nanị tinye ngalaba hulfingtonpost.com, darodar.com na ngalaba ndị ọzọ niile na ndepụta. Mgbochi nchịkwa nwere ike ime ngwa ngwa maka otu nzube ahụ.